Madaxweynaha koonfur Galbeed oo Ciidamada la dardaarmay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Madaxweynaha koonfur Galbeed oo Ciidamada la dardaarmay
Madaxweynaha koonfur Galbeed oo Ciidamada la dardaarmay
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftagareen) ayaa sheegay in Ciidamada Qalabka sida looga baahan yahay inay ilaaliyaan anshaxa Ciidamannimo, isla markaana isku ixtiraamaan sida ay u kala darajo sareeyaan.
Waxaa uu sheegay laftagareen, isagoo ka qeyb galayay kulan ka dhacay magalada Baydhabo inay mararka qaar dhacdo in askarta ay amar diido ku sameeyaan Saraakiisha ka sareeysa taasina aan loo baahneyn.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftagareen) ayaa Ciidamada uga digay inay ka mashquulaan waajibadkooda Shaqo iyo dagaalka ay kula jiran Al-Shabaab.
Hadalka Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli degano ka tirsan Maamulkaas ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya Ciidamada dowladda & Al-Shabaab.
Next articleDHAGEYSO:40 dhallinyaro ah oo dhameystay tababar ku saabsan qaabka looga kallumeysto badwaynta